ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည်ရန်လိုမုန်းတီးခြင်းရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ | Dogs World
မကြာသေးမီအချိန်များအထူးသဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားကြောင့်လူအများစုတို့သည်သူတို့၏ခွေးများကိုမသင့်လျော်သောနည်းဖြင့်တွေ့မြင်လာကြသည်။ မကြာသေးမီအချိန်အထိအန္တရာယ်ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည့်ခွေးများသည်အကုန်အကျများစွာဖြင့်ရှောင်ရှားရမည့်တိရစ္ဆာန်များဖြစ်လျှင်ယခုအခြေအနေသည်ဤမျိုးဆက်များအတွက်သာမကသူတို့မအပ်နှံသေးသောမွေးမြူသူများအတွက်ပါပိုမိုရှုပ်ထွေးလာခဲ့သည်။ သူတို့ကလူပေါင်းကောင်းသောခွေးဖြစ်လာဖို့လိုအပ်ပါပြီ။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထက်ပိုသောနှစ်ခုသည်အံ့ that စရာမဟုတ်ပါ ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည်ရန်လိုမုန်းတီးခြင်းရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ ကောင်းပြီဒါဆိုအဖြေကိုသိရအောင်
Aggression သည်သက်ရှိအားလုံး၏သဘာဝအပြုအမူဖြစ်သည်။ ခွေးဖြစ်လျှင် ၎င်းသည်အဖွဲ့ ၀ င်တစ် ဦး စီ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်ရန်ဆောင်ရွက်သည်။ သူတို့ဘ ၀ ဟာအန္တရာယ်ရှိမှသာအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ သို့သော်၎င်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝသို့မဟုတ်သေခြင်းအခြေအနေတွင်ရှိခဲ့လျှင်မည်သူမဆိုတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်တုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးသည်ဟုဆိုလိုပါသလော။ မဟုတ်ဘူး။
ကြီးစိုးခြင်းသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သဘာဝအပြုအမူတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ၎င်းကြောင့်အသင်း ၀ င်တစ်ခုတည်းသည်အခြားသူများကို“ အမိန့်ပေး” သူဖြစ်သည်။ ခွေးကြီးစိုးနိုင်သလား? ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုဖြစ်ရင်မင်းမှာမဖြေရှင်းရသေးတဲ့ပြhaveနာတစ်ခုရှိနေလို့ပါ။
သူကဂိမ်းကာလအတွင်းမကောင်းတဲ့လမ်းပြုမူလား? ဥပမာအားဖြင့်၊ အခြားသူများကိုသင့်ကစားစရာနှင့်ကစားစေလိုသည်မဟုတ်လော။
အကယ်၍ သင်သည်ဤမေးခွန်းများမှဟုတ်ကဲ့ဟုဖြေဆိုပါကထိုအခြေအနေများတွင်ရန်လိုသောခွေးတစ်ကောင်ရှိကြောင်းသင်သိသင့်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောခွေးတစ်ကောင်မဟုတ်ပါ။ သင့်ကိုကူညီရန်, အပြုသဘောဆောင်သည့်သင်တန်းဆရာတစ်ယောက်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၎င်းသည် furry များအတွက်အခြားသူများနှင့်အသက်ရှင်ရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » သိချင်စိတ် » ကျွန်ုပ်၏ခွေးသည်ရန်လိုမုန်းတီးခြင်းရှိမရှိမည်သို့သိနိုင်မည်နည်း။